Uhlu Lwezakhiwo. Inethiwekhi yamazwe omhlaba - realtyWW
September 01, 2016 by realWW, Ukubukwa okuphelele:
realtyWW iwebhusayithi yamanye amazwe okukhangisa izindlu nomhlaba. Sicela uthumele uhlu lwezezakhiwo nomhlaba landela leli khasi Abanikazi, abafisa ukuheha ukunakwa okukhulu kohlu lwabo lwezezakhiwo, imvamisa banaka kakhulu imibono yokudala futhi abacabangi ngokunemba kokuhlanganiswa kohlu. Lo mbhalo ukutshela ngezinto ezibaluleke kakhulu lapho ubhala uhlu lwezezakhiwo.
Ungabhala kanjani uhlu lwezezakhiwo. Isisekelo sezisekelo
Umbhalo wanoma yiluphi uhlu lohlu lwezezindlu kufanele aqukethe yonke imininingwane edingekayo mayelana nento leyo: ikheli, inani lamakamelo, indawo yokuhlala yento (kokubili okuvamile nokwokuhlala), usayizi wasekhishini, imininingwane yokugezela nokunye. kuvuliwe.
Lapho ubhala uhlu lwezezakhiwo kubalulekile nokuthi ubheke ukutholakala kokuhamba.
Iphuzu elibalulekile lapho kubhalwa uhlu lwempahla yendawo esemthethweni isimo sempahla: ukuthi impahla iphethwe isikhathi esingakanani, bangaki abanikazi bento leyo, nokuthi bangaki abantu ababhaliswe entweni, nokuthi lokhu kuthengiselana kungenye indlela eyodwa.
Mayelana nohlu lokuqashwa kwezakhiwo, lwakhiwe emgomeni ofanayo nezikhangiso ezithengiswa impahla, kepha lapha udinga ukugcizelela amanye ama-nuances angabalulekile kangako lapho uthengisa. Okokuqala, udinga ukubhala ngesikhathi sokuqashisa: nsuku zonke, izinyanga ezimbalwa noma okuhlala isikhathi eside. Okwesibili, chaza ngokuningiliziwe ngesimo impahla: ukulungiswa, ukuba khona kwefenisha nezinto zokwenza izinto, ikhebula le-TV, noma ithelevishini yedijithali, ukufinyelela kwi-Intanethi.
Futhi ukunciphisa inani lezingcingo ezingadingekile, kufiseleka ukuthi sikhombise ngokushesha ukuthi izifiso zabaqashi besikhathi esizayo "baqasha indawo yokuhlala imibhangqwana", "azikho ezifuywayo", "kungenzeka nezingane". Uma kunesidingo, chaza inani eliphakeme labahlali, isimo sengqondo ngokubhekela ezinganeni ezincane, asebekhulile nasezifuyweni. Qiniseka ukuthi ukhombisa ekugcineni noma ekuqaleni kohlu imininingwane yokuxhumana yomthengisi: igama, ifoni, isikhathi esifunekayo sokubiza.
Embhalweni wohlu lwezezakhiwo okuqashiswa noma ukuthengiswa ngalo, kuyadingeka ukuba ube ne- "anchor" ukuchaza isici sefulethi noma indlu, lapho ungagxila khona abathengi.
Isibonelo, uma ifulethi lilungile elilungisiwe, empeleni ukugcizelela kukho, kepha ungakhohlwa ukukhombisa usuku lomsebenzi wokulungisa bese ubanikeza uhlu olufushane.
Imvamisa, abathengi banesifiso, ngokwesibonelo, lapho amafasitela abheka phansi. Ungenza ukugxila okuhle, ngokwesibonelo, ukuthi ifulethi ilula, ngoba amafasitela abheke eceleni kwelanga, noma athule lapho ephuma egcekeni.
Lapho uchaza “ihange” kungcono ukugwema ulimi olomile futhi usebenzise imishwana emifushane yokomzwelo. Ngosizo lwabo, ungakwazi "ukufinyelela" ikhasimende.
Ukuze ugcizelele isithunzi sento, kuyathandeka ukusebenzisa ama-epithets: "indlu ebanzi, intofontofo, ekhanyayo," "isitolo esishibhile esisezingeni eliphansi phansi", "ifenisha nezinto zokwenza izinto ngezipho" noma " Umbono omuhle wokushona kwelanga kusihlwa. ”
Umgomo oyinhloko akuyona into yokuthi yonke imininingwane edingekayo kufanele inikezwe ngendlela efanele futhi ingekho imininingwane engenamsebenzi.
Ukuze wenze uhla lwezinto ezithengiswayo luhehe abathengi, kufanele lube olungavamile, olukhumbulekayo nolungahlelwanga. Isibonelo, isikhangiso esinesihloko esithi "Thenga ifulethi bese uthola ikati lesipho" okungenani sizodonsela ukunakekela komthengi ongabakhona, futhi uzoya ekhasini afunde incazelo yento.
Kodwa-ke, akuwona wonke amabinzana afanayo angasetshenziswa lapho kubhalwa uhlu lwezezakhiwo, amanye azoba nomphumela ophambene ngokuphelele futhi azothusa abathengi.
Isibonelo, uma ucacisa ukuthi "eceleni komgwaqo onemigwaqo eminingi engenawo ama-traffic jams", okusho ukuthi kukhona umsindo oqhubekayo wezimoto nokungcoliswa komoya ngamagesi aqeda kakhulu. Akunakwenzeka ukuthi kuzoba mnandi kumthengi. Isimo esifanayo simakwe ngokuthi "singanaki inkundla yokudlala yesikole", "indawo ebheke phambili, eyakhiwe ngentshiseko." Esimweni sokugcina, "iqiniso" kungenzeka lingasebenzi, ngoba akekho ofuna ukuhlala iminyaka embalwa indawo yokwakha.
Ngaphezu kwalokho, kufanele uqaphele ngamagama anjengokuthi "ukufinyelela kwabahamba ngezinyawo esiteshini kusuka lapho ungaya khona kalula kunoma iyiphi indlela." Le nkulumo ibukeka sengathi ikhuluma ngokutholakala okuhle kwezithuthi, kepha ngakolunye uhlangothi ingahlotshaniswa nokungcola. , ukugeleza okukhulu kwabantu, noma okubi kakhulu - kunendawo eyisigebengu eyinkimbinkimbi.
Imvamisa, umthengi, ebuka uhlu lwezezakhiwo, uzibona njengesithombe, kubandakanya nengxenye yombhalo, inqobo nje uma ifonti likhethwe ngobuhlakani. Ngakho-ke, kuhlu lwezezakhiwo kuyinto engcono ukuyisebenzisa evamile futhi ikhululekile ekuboneni kwamafonti anjenge-Agency, i-Times New Roman, iCalibri. Kungcono ukugwema izinketho ezihlukile, ngoba kulolo hlu lwezezakhiwo kunzima ukulufunda.
Ukuqokomisa, kungcono kakhulu ukusebenzisa izindlela ezijwayelekile, isibonelo, i-italic, underline, noma ngesibindi. Kungcono ukukhombisa ubuhlakani ku-isethulo, njengoba sekushiwo, kubeka umthengi kumfashini oyifunayo.
Akuwona wonke amasayithi angavumela abathengi bawo ukuthi bashintshe ifonti yohlu lwezezakhiwo, ngenkathi kungenzeka ku-realtyWW.
Ithegi yentengo ngokubhuka
Intengo ingenye yamaphoyinti abaluleke kakhulu wohlu lwezinto ezithengiswayo noma ngokuqashiswa. Ukuthengiswa okuphumelelayo, kufanele kube okuphakathi noma okuncane okuncane kunokwendawo.
Uma ufuna ukuthengisa indlu ngokushesha, akudingekile ukubhala ngesimemezelo mayelana "nokuthengiswa okuphuthumayo". Ngakolunye uhlangothi, kubonakala ngabathengi njengokukhwabanisa okungenzeka kumnikazi. Ngakolunye uhlangothi - Amakhasimende angafaka isicelo sesaphulelo esingeziwe. Kusobala ukuthi leyo ndlela noma enye ayifaneleki kumthengisi.
Uma ubhala kuhlu lwezezakhiwo "Ukuxoxisana ngentengo", ngakho-ke kuzomemezela ngokushesha ukuthi indlu yakho ayifanele intengo ebekiwe. Ungasebenzisa futhi yonke "ihange" efanayo. Isibonelo, uma inani lezinto lingaphansi kwentengo yemakethe, ungabhala kuhlu lwezinto ezithengiswayo ngokuthi “intengo engcono kakhulu endaweni.”
Uhlu lwezezindawo ezithengisa ngokuthengisa, ukuqashisa kumele luhambisane nesithombe sekhwalithi enhle.
Amaphutha ajwayelekile kakhulu ezenzeka ohlwini ngalunye lwezezakhiwo zesibili
- azikho izithombe
- Izithombe ezifiphele
- isithombe esithathwe kusihlwa
Ukugwema izehlakalo ezahlukahlukene, ngiphakamisa ukuthi uthathe isithombe phambi kweflethi ngemuva kokuphuma, ngoba izithombe zamakamelo, lapho izinto zisakazeke khona futhi zihlukaniswa, zingadonsela umuzwa wokuhlanjalazwa nokungafaneleki.
Izithombe kumele zivalwe kuwo wonke amakamelo efulethini, ukuze indlu uqobo, ifiseleke uma amawindi enikeza umbono omuhle. Futhi kuzoba umqondo omuhle ukuthatha isithombe sezindlu ezikhaleni ezihlangene.
Futhi, isithombe kufanele sikhombise ukutholakala kwefenisha eyakhelwe ngaphakathi eflethini, emakamelweni ezitolo noma ezindlini zokubopha, ama-niches okugcina, ama-loggias kanye nama-balcony uma ekhona
Uhlu Lwezakhiwo. Khangisa mahhala kwiWebhusayithi Yomhlaba jikelele
3 (60%) 4 amavoti
realWW September 1, 2016
Le entry safakwa ngo Ukukhangiswa Kwezezakhiwo futhi umake Mahhala, Uhlu Lokuthengiswa Kwezakhiwo Zomhlaba, Uhlu Lokuthengiswa Kwezezakhiwo Lwamazwe Ngamazwe Mahhala, Listings, Izinhlu Zezindlu ezithengiswayo, Uhlu Lokuthengiswa Kwezezakhiwo Okuku-inthanethi, Thumela Uhlu Lokuthengiswa Kwezezakhiwo, Thumela Uhlu Lokuthengiswa Kwezezakhiwo Mahhala, Uhlu Lwezakhiwo, Ukuthengisa izindlu, Uhlu Lwama-ejensi Yezezakhiwo, Uhlu Lomenzeli Wezezakhiwo, Uhlu Lwezinkampani Zezindlu, uhlu lwezezindawo, Uhlu Lwezakhiwo Nezindawo Zokuqashwa, Uhlu Lokuthengiswa Kwezakhiwo, Uhlu Lokuthengiswa Kwempahla Mahhala, Uhlu Lwezindawo Zokuhweba eziku-inthanethi, Iwebhusayithi Yezinghlu Zezakhiwo, uhlu lwezezimali. Bookmark Permalink.
Kwangathi 3, 2016 Khetha kuwebhusayithi "realtyWW" indlu yephupho lakho Ukukhishwa kwabezindaba ngu: Olesja Poberezhets Ukraine, "realWW" - iphrojekthi yokulangazelela ukuthenga indlu emhlabeni wonke ngaphandle kokuphuma. Ngenxa ye- "realtyWW" ungathenga kalula, uthengise, uqashe futhi uqashe izakhiwo emhlabeni wonke, ngaphandle kwendawo yakho. Kungaba iGibhithe, IPhilippines, Korea, Japan, Greece, France. Unleash umcabango wakho. "realtyWW" yenzelwe ochwepheshe base-Ukraine njengohlelo lokuguqula olugxile kubantu. "i-realWW" imahhala futhi izoba njalo. […] Posted in Ukutshalwa Kwezezakhiwo
Mashi 5, 2020 Izimfihlo 5 Zokumaketha Okuthengiswayo Kwezezakhiwo Eziningi Getting Your Property In Front Of The Right People The right buyer can actually expand your profits. You do want to work with real estate agents, except when you don’t. For all property sale situations, real estate marketing and different factors will make the best options! For something that may not be the best for someone with a very similar property. https://pixabay.com/photos/architecture-building-driveway-1867187/ Getting the balance right can be hard. You’ve got […] Posted in Ukukhangiswa Kwezezakhiwo, Ukuthengisa Izakhiwo Nezindawo, Ibhizinisi Lezakhiwo
April 17, 2017 Izindleko eziyi-7 ezinganakwa lapho kuqashwa indawo yokuhlala Ukuthi ngabe uzihlola yini ngokuqashwa okusha ukuze uhambisane nomlingani wakho noma uzenzele nje, kuyingqophamlando yokufuna kwakho ukuzimela. Ukuzingela amafulethi kungaba okujabulisayo, noma kunjalo, ungaphazanyiswa kakhulu futhi ulungiselele izinto ezibaluleke kakhulu — izindleko ezifihliwe nezingalindelekile eziza nokuqasha. Akungatshazwa ukuthi ukuhamba kuyabiza. Uma ungeke ukwazi ukuzibophezela ukuthenga indlu yakho ngenxa yezinkinga zezezimali, wazi ukuthi ukuqashisa efulethini akushibhile njengoba […] Posted in Ukutshalwa Kwezezakhiwo
November 15, 2018 Ukutshala imali kwi-Real Estate- Izizathu zokuhambela imihlangano yokutshala imali Amasemina wokuthengisa izindlu atholakala ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene. Ukuthi udinga ukuvuselela okungakunika amandla wokuzethemba noma okusha ngokuphelele enqubweni yokuthenga kwasekhaya, ungathola umhlangano endaweni yakho ongakusiza lapho usendleleni. Kunezizathu ezahlukahlukene zokuthi kungani abatshalizimali bezakhiwo beqhubeka nokubuyela kulolu hlobo lomcimbi. Kuyacaca ukuthi kuningi okufanele kutholakale kulama semina, kufaka phakathi izinzuzo eziningi njalo lapho uya kuzo. Ezokuxhumana […] Posted in Ukutshalwa Kwezezakhiwo